SRK si lama filaan ah caddow waxaa ugu noqday Karan Johar balse taageerayaasha SRK kama aamusin arinkan! – Filimside.net
SRK si lama filaan ah caddow waxaa ugu noqday Karan Johar balse taageerayaasha SRK kama aamusin arinkan!
March 23, 2019 Zakarie Abdi
Marnaba laguma fikirin saaxiibtinimada dhow ee ka dhaxeyso Bollywood King Khan Aka Shah Rukh Khan iyo filim sameeye Karan Johar in xiriirkooda xumaan doono laakiin Karan haatan wuxuu sameeyay arin SRK aad u dhaawacday sidoo kalena sababi karto mustaqbalka dhow inaysan isla shaqeyin.
Karan Johar ayaa baraha bulshada ka abuuray xasarad hor leh iyo dagaal dadban madaama uu Karan Johar Like saaray ama uu jeclaaday taageerayaasha Akshay Kumar qoraal aflagaado ku dheehan ay Twitter-ka soo dhigeen kuna weerareen Shah Rukh Khan!
Karan wuxuu iloobay saaxiibtinimadii soo jireenka ahayd ee SRK kala dhaxeesay wuxuuna soo dhaweestay Akshay Kumar oo haatan u sameeyay filimka Kesari ee tiyaatarada wacdaraha ka dhigaayo sidoo kalena Karan wuxuu Akshay u maal galinayaa filimka Good News ee bisha September sanadkan la daawanayo Kareena Kapoor Khan-na atirisho kowaad ka tahay.
Karan Johar si ku tala gal ah ayuu Like u saaray qoraal ay taageerayaasha Akshay Kumar ku aflagaadeeyeen SRK kuna tilmaameen fulay fashilmay oo aan maanta waxba ka ahayn Bollywood-ka!
Taagerayaasha SRK oo baraha bulshada awood badan ku leh ayaa haatan bilaabeen olo ole xoogan oo ay Karan Johar ku weerarayaan waxayna sameeyeen hal hees baraha bulshada qabsaday oo ah #ShameOnKaranJohar oo ah ceeb hakugu dhacdo Karan Johar madaama uu jeclaaday ama uu ka helay qoraal saaxiibkiis SRK lagu aflagaadeenayo.
SRK kama uusan hadlin arinka uu Karan Johar sameeyay balse difaacis waxaa ugu filan taageerayaashiisa oo haatan baraha bulshada abaabul xoogan ka wadaan waxayna wacad ku mareen inay Karan si walbo u ceebeesan doonaan ilaa uu arinkan raali galin ka bixiyo.
Waxaa Aqrisay 667